အရည်အသွေးမြင့် စိတ်ကြိုက်လိုဂို ဖက်ရှင်အသေးစား စိတ်တိုင်းကျ Holographic PVC သီးသန့်တံဆိပ် အလှကုန်ပစ္စည်း အိတ်နှင့် အိတ်များ အလှကုန်အိတ် စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | လန်းဟိုင်း
စိတ်ကြိုက်လိုဂို ဖက်ရှင်အသေးစား သီးသန့် Holographic PVC သီးသန့်တံဆိပ် အလှကုန်ပစ္စည်းအိတ်နှင့် အိတ်များ အလှကုန်အိတ်များ
ထုတ်ကုန်အမည် စိတ်ကြိုက်လိုဂို ဖက်ရှင်အသေးစား သီးသန့် Holographic PVC သီးသန့်တံဆိပ် အလှကုန်ပစ္စည်းအိတ်နှင့် အိတ်များ အလှကုန်အိတ်များ
အရွယ်အစား 23*8*13cm၊ 20*7*12cm၊ 16*6.8*11cm / စိတ်ကြိုက်
အထူ 0. 3MM- 0.5MM
ပုံနှိပ်ခြင်း။ Silkscreen၊ Hot Stamping၊ UV-Printing
အသုံးပြုမှု သကြားလုံးများ၊ ကွတ်ကီးများ၊ လက်ဆောင်များ၊ နှုတ်ခွန်းဆက်ကတ်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ပစ္စည်းသေးသေးများ၊ အလှကုန်များ၊ ဆံပင်အသုံးအဆောင်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အိမ်သာများ၊ အတွင်းခံဘရာစီယာ၊ တီရှပ်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ ဖိနပ်၊ အင်္ကျီ၊ ဆွယ်တာ၊ ဆွယ်တာ သို့မဟုတ် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များ၊ အကျီများ၊ လေကာအင်္ကျီများ၊ ဝတ်စုံများ၊ သန္တာ ကတ္တီပါအိပ်ဝတ်အိပ်များ၊ အခြားဆောင်းဦးနှင့်ဆောင်းရာသီအဝတ်အစားများ၊ အောက်ပိုင်းအကျီများ၊ အင်္ကျီများ၊ သားရေနှင့်အခြားထူထပ်သောဆောင်းဦးရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီအဝတ်အစားများ။
ပုံစံ/မော်ဒယ် နောက်ကျောတွင် အလုံပိတ်၊ ဘေးသုံးဘက် (ဇစ် သို့မဟုတ် ဇစ်မပါ) အလုံပိတ်၊ ဘေးထောင့်၊ လေးဖက်စပ် အလုံပိတ်၊ အောက်ခြေတွင် တပ်ဆင်ထားသော အိတ်များ၊ အလိုအလျောက် ထုပ်ပိုးသည့်စက် ထုပ်ပိုးမှုရုပ်ရှင်၊ သေသပ်သောအိတ်များ။
» 1.FACTORY တိုက်ရိုက်စျေးနှုန်းပေးပါသည်။
» 2. အရည်အသွေးကောင်း & eco-ဖော်ရွေသောပစ္စည်း
» 3. အရေးတကြီး ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါ။
» 4.low MOQ; မင်းရဲ့အသေးစားမှာယူမှုကို ကြိုဆိုပါတယ်။
» 5.ONLINE ပေးချေမှု သည် သင့်စိတ်ဝင်စားမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
» 6.SUPPLIER လျှို့ဝှက်ချက်သဘောတူညီချက် ရနိုင်ပါသည်။
» 7. After Sales ဝန်ဆောင်မှုများ 5D*24H
1. နမူနာများ ရနိုင်ပါသလား။
2. သင့်စက်ရုံသည် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
အရည်အသွေးသည် ပထမဦးစားပေးဖြစ်သည်။ ကုန်ကြမ်းမှ သင်္ဘောတင်ခြင်းအထိ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲအရေးကြီးပါသည်။
3. သင် OEM / ODM ကိုလက်ခံပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အမျိုးမျိုးသောအရောင်နှင့် ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး သင်နှစ်သက်သလို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
4. မင်းရဲ့ကုန်ကြမ်းက ဘယ်လိုလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများရောင်းချသူများအားလုံးသည်5နှစ်ကျော်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးသွင်းသူများထံမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး၊ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အမြန်ပေးပို့ပစ္စည်းများကိုရနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်အမြန်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းနိုင်စေရန်ကူညီသည်။ ပေးပို့ခြင်း။
5. ကုမ္ပဏီက ဘာထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်လုပ်တာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးသမီးများအိတ်၊ ဖက်ရှင်ကျောပိုးအိတ်များ၊ ကြမ်းပိုးအိတ်များ၊ ပခုံးအိတ်များ၊ လက်ကိုင်အိတ်များ၊ အလှကုန်အိတ်များ၊ စျေးဝယ်အိတ်များ၊ ညနေခင်းအိတ်များနှင့် အခြားဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သော အိတ်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် အထူးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ OEM / ODM ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပြီး အိတ်အမျိုးမျိုး၏နမူနာများကို ဖန်တီးပါသည်။
6. ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကော ဘယ်လိုလဲ။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဒီဇိုင်နာ ၆ ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့် မန်နေဂျာ ၅ ဦးနှင့် အကြီးတန်း ပန်းချီဆရာ ၈၀ ပါဝင်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို မြောက်နှင့်တောင်အမေရိကနှင့် EU၊ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ဟောင်ကောင်နှင့် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဒေသများသို့ အဓိကရောင်းချပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် DHL၊ FedEx၊ UPS၊ EMS၊ SF အမြန်စသည်ဖြင့်၊ ဥရောပနှင့်အခြားနိုင်ငံများ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်မျှော်လင့်ပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
နောက်တစ်ခု: လက်ကား Amazon Hot Sale PVC Transparent Square Underarm Jelly Tote Bags အမျိုးသမီးများအတွက် Casual Ladies Purses for Women Hand Bags
Holographic Pvc အိတ်
လက်ဝတ်ရတနာအတွက် Holographic Pvc အိတ်
Holographic Pvc ကမ်းခြေအိတ်
Holographic Pvc အလှကုန်အိတ်
Holographic Pvc အလှကုန်အိတ်များ
Holographic Pvc အလှပြင်အိတ်
Holographic Pvc ခရီးသွားအိတ်
Pvc Bag Holographic စိတ်တိုင်းကျ
Pvc Holographic အိတ်
Pvc Holographic စျေးဝယ်အိတ်